MP3 Music Ihe Ntụgharị n'efu maka obere oge | Esi m mac
MP3 Music Ihe Ntụgharị free maka obere oge
Ugbu a na ịntanetị anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa nke ekwe ka anyị tọghata music faịlụ ndị ọzọ formats maka free, ma ọtụtụ n’ime ha na-amachi ọnụ ọgụgụ nke ụdị dakọtara, yabụ ọ bụ nhọrọ ọkara ọkara nwere ike ịzọpụta anyị site na mkpa ụfọdụ mana ọ bụghị mgbe niile. Na Mac App Store anyị nwekwara ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa nke ụdị a, ngwa nke n'ọtụtụ oge nwere ọnụahịa nke na-adịchaghị ọnụ ala, mana anyị nwere ike iji uru dị ka nke anyị gosipụtara gị taa. MP3 Music Ihe Ntụgharị, dị ka aha ya na-egosi, bụ ngwa na-enye anyị ohere iji tọghata faịlụ egwu na ụdị dị iche iche.
MP3 Music Ihe Ntụgharị nwere a mgbe price na Mac App Store nke 16,99 euro, ma nke obere oge anyị nwere ike ibudata ya kpamkpam n'efu. Site na ngwa a anyị nwere ike ịgbanwe faịlụ anyị na MP3 ka M4R, FLAC, AIFF, MKA, ALAC, WMA, WAV, OGG, AC3 ... Mana ọ na - enye anyị ohere iwepu ọdịyo site na vidiyo vidiyo ozugbo gaa otu n'ime usoro ahụ ekwuru n’elu.
Ke adianade do, ọ na-enye anyị ohere dezie songs ka gbanwee ha ka ụdaolu, ụda na dị ka ị maara na iPhone nwere oge kachasị elu nke 30 sekọnd na na ekele maka Clip ọrụ anyị nwere ike ime ha ngwa ngwa. Ma, ọ na-enye anyị ohere mix anyị mmasị music site isonyere ọtụtụ ọdịyo faịlụ nke mere na ọ na-enye anyị naanị n'ihi nke Nchikota na a otu ọdịyo faịlụ. MP3 Music Ihe Ntụgharị-arụ ọrụ na niile formats dakọtara na ọtụtụ nke mobile ngwaọrụ na ahịa, nakwa dị ka ịbụ dakọtara na ọtụtụ ndị music Player na-adị taa.
MP3 Music Ihe Ntụgharị nkọwa
Mmalite ikpeazụ: 10-08-2016
Gosiri maka ihe karịrị afọ 4.
Mmekọrịta: OS X 10.5 ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » MP3 Music Ihe Ntụgharị free maka obere oge
Apple dị nso imeghe ụlọ ahịa Apple mbụ na India
Kacha ọhụrụ patent maka Apple Watch egosi haptic moto